Akụkọ - Lida Plastic Ridid Product Quality Iji rute ọkwa mba ụwa ma ọ bụ nke mba ọzọ
PP mpempe akwụkwọ
Eyi isiike mpempe akwụkwọ (kenkowaputa elu)
PP mpempe akwụkwọ siri ike (elu a kpụrụ akpụ)
Eyi isiike mpempe akwụkwọ (eriri masked)
Eyi isiike mpempe akwụkwọ (ọkụ retardant)
Eyi mpempe akwụkwọ siri ike (UV kwụsiri ike)
Mpempe akwụkwọ PPH siri ike
Mpempe akwụkwọ HDPE
Ọnụahịa kasị elu nke CPVC
PVC gburugburu mkpanaka
Ogwe osisi PVC
Mkpanaka ịgbado ọkụ
Ogwe mkpuchi PVC
PP ịgbado ọkụ mkpanaka
HDPE ịgbado ọkụ mkpanaka
PVC-M ọkpọkọ mmiri
UPVC drainage na ọkpọ mmiri
Igwe eletriki UPVC
Igwe ihe ọkụkụ UPVC
UPVC ọkpọkọ mmiri
HDPE ọkpọkọ mmiri
HDPE igbapu mmiri na ọkpọ mmiri mmiri
HDPE mgbidi abụọ corrugated anwụrụ
HDPE jiri eriri igwe na -eme ka ọkpọkọ corrugated gbara gburugburu gburugburu
Ihe mkpuchi PVC
Ngwa akwa ọkpọkọ HDPE
Ogo ngwaahịa Lida Plastic siri ike iru mba ụwa ma ọ bụ ọkwa mba ọzọ
Ngalaba nyocha dị iche iche enyochala ma kwenye Lida Plastic Rigid PVC, ruo na ndokwa nke Hebei Province iji nweta usoro mmejuputa njikwa njikwa mba ụwa, meriri nleba anya ahịa na nchịkwa mpaghara Hebei nke “ntinye akwụkwọ asambodo ọkọlọtọ mba ofesi” nyere. . Akwụkwọ a na -egosi na ogo ngwaahịa anyị erutela ọkwa mba ofesi ma ọ bụ ọkwa mba ofesi dị elu.
Ogwe mpempe akwụkwọ PVC anyị sitere na thermoplastic nke ukwuu. Ọ nwere ezigbo nguzogide kemịkal na nrụgide na-akụda mmụọ, mkpuchi ụda, mkpuchi ọkụ na nnabata mkpọtụ yana nchekwa ọkụ na mgbochi corrosion. Ogwe mpempe akwụkwọ PVC na -enye ike siri ike yana ezigbo mmetụta nkwụsị. A na-eji usoro na-eguzogide ihu igwe eme ya, ngwaahịa a bụ mmiri na mmiri na-eguzogide n'ihi na ọ naghị amịkọrọ mmiri. Akwụkwọ PVC na-adịte aka ma na-ejigide agba ya nke ọma kwa afọ. Ọzọkwa, ịdị arọ ya na -eme ka nchekwa na njem dị mfe.
Polyvinyl chloride (PVC) bụ otu n'ime thermoplastics kachasị arụ ọrụ taa. A na -eji ya nke ukwuu na ụlọ ọrụ niile site na nchịkọta nri, ruo na iwu ụlọ. Ọdịdị ike ya dị oke mma yana nguzogide ire ọkụ dị elu, yana ọnụ ala ya, na-eme ka ọ bụrụ ihe nhọrọ maka ngwa kachasị achọ.
Oke okpomọkụ ọrụ maka PVC bụ 140 ° F (60 ° C). Enwere ike gbanwee ihe anụ ahụ nke PVC ngwa ngwa site na mgbakwunye nke plasticizers, ndị na -agbanwe mmetụta na ihe ndị ọzọ iji zụlite ma kwalite ihe ndị akọwapụtara. PVC anyị siri ike bụ ihe na -eguzogide corrosion nke nwere mmetụta mmetụta nkịtị ma ejiri ya ebe mwakpo kemịkalụ bụ ihe kacha echegbu.
Oge ezipụ: Mar-25-2021
Ekwentị ： 0086-17731201156
E-mail ： lidaplastic@ldsy.cn
Adreesị ： Mba.316 Pingan West Street, Shunping County, Baoding City, Hebei, China 072250
ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị nke ukwuu